Farmaajo: Dagaalka Al-Shabaab aan u midowno - BBC News Somali
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa la hadlay boqollaal qof oo isugu soo baxay magaalada Muqdisho.
Dadka isu soo baxay waxay ku dhawaaqayeen hadallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, waxayna sheegeen in "aysan markan ka baqayn kooxda".
"Waxaan idiin sheegayaa, dhallinyaroo, Hadaad iskuulka dhamaysaan, xageed u shaqa tageysaan? meel jidadka la idiinku xasuuqaayo. Waa in aad u istaagtaan difaaca naftiida, difaaca hooyooyiinkiina, difaaca deriskiina iyo difaaca dalkiina," ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
"Difaaca dalkaaga waa muqadas, difaaca dadkaaga waa muqadas, difaaca diintaada waa muqadas. dib uma noqoneyno, waxaanna hogaaminayaa dagaalka, aniga ayaana horey maraayo."
"Shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaa qeyb ka noqonaya, idinkana waa in aad qeyb ka noqotaan," ayuu yiri Farmaajo.
Hooyo dadkaas ka mid ahayd waxay tiri; "Soomaaliya ha noolaato, Al-Shabaab doonimayno, hooyo dile doonimayno, aabe dile doonimayno, caruur dile doonimayno, arday dile doonimayno, dad laaye doonimayno, Alshabaab doonimayno.
Dhanka gobollada, Magaalada Baydhabo waxaa isugu tagay boqollaal qof oo ku dhawaaqayay "Al-Shabaab doonimeyno," waxaana la hadlay maamulka magaalada.
Dhanka Beledwayne dad isu soo baxay ayaa ku qeylinayay "Al-Shabaab ha dhaco," waxayna kooxda ku eedeynayaan in qarixii muqdisho ay masuul ka ahaayeen.
Maxay tahay sababta aan caalamka looga hadal hayn weerarkii Muqdisho?